यसरी बाहिर अाउँदैछन् नेपालमै हाइप्रोफाइलहरूकाे सेक्स स्क्याण्डल! जान्नुहोस – Khabartime
२८ आश्विन २०७५, आईतवार ०८:२१ 111 पटक हेरिएको
विशेषगरी महिला र बालवालिकामाथि हिंसाका घटनाको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । ९ महिनाकी शिशुदेखि ७४ वर्षीया बृद्धासमेत बलात्कारको शिकार भएका छन् । यस्तो लाग्छ सामाजिक अपराधसँग सरकार निरीह हुँदैछ । अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ख्याती कमाएको नेपाल प्रहरी कञ्चनपुर प्रकरणबाट बदनाम बनाइँदैछ ।
दिनहुँ बलात्कार र हत्याका घटना आउँदा सरकार किन रक्षात्मक बन्दैछ ? कतिपय घटनाका बाहेक अन्य बलात्कारका घटनामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ परेका पनि छन् । धेरैजसो बलात्कारका घटनामा आफन्त, छिमेकी वा चिनजानकै मान्छे संलग्न भएको पाइन्छ । अपराधी जेल चलान पनि भएका छन् ।
‘फिजिकल डिजायर’का कारण भएको जस्तो देखिँदैन । यौन शन्तुष्टिका लागि भएका बलात्कार यी हुँदै होइनन्
तर, एउटा प्रश्नको जवाफ भने अझै पाइँदैन–आखिर कस्तो मनोवृत्तिको मान्छेले बलात्कार जस्तो घृणित कार्य गर्छ ? अहिलेसम्म जे जति बलात्कारका घटनामा अभियुक्त समातिएका छन्, उनीहरुको मनोवृत्तिको बारेमा अध्ययन भएको पाइँदैन । त्यो कोणबाट सोच्ने कि नसोच्ने ?
ठेलामा सेकुवा बेचेर बिदेशमाभन्दा
डा.सुनिल शर्माद्वारा बिपन्न बिरामीको
‘जीवनः काँडा कि फूल’
यो कस्तो नियम सरकार!
यी हुन् पत्नी पीडित
दशैंमा मदिरा पिएर सर्वसाधरणलाई